Umthandazo ku-Oshun Wothando.? Tsala uthando kunye nokuBuya kwakhona.
Umthandazo we-Oshun. Ngalo lonke ixesha amandla othando kukubamba ezo zixhobo zokomoya zazithunyelwe kuthi ngenzondelelo.
Masikhumbule ke ukuba kwizibhalo ezingcwele uThixo ngokwakhe usifundisa ukuthandaza, oko kukuthi, olu qheliselo kufuneka lwenziwe ngesazela kunye noxanduva kuba iziphumo zisenokusothusa.
1 Umthandazo ku-Oshun Ngubani Oshun?
2 Umthandazo ku-Oshun wothando
3 Ndingawenza nini umthandazo?
4 Ngaba umthandazo we-Oshun usebenza ngokukhawuleza?
Umthandazo ku-Oshun Ngubani Oshun?
Sisithixo kwinkolo yamaYoruba. Kukholelwa ukuba unamandla akhethekileyo phezu kothando kunye nayo yonke imxholo yovakalelo.
Kukholelwa ukuba ekuqaleni kwezenkolo abafazi babengamkelwanga kwaye wayeziva ekhutshelwe ngaphandle kuba ukholo lwalungazinzanga.
Oku kucaphukisa kuye kwamkhokelela ekubeni enze izinto ezazithintela abafazi beli dolophu ukuba bangakhulelwa abantwana, ngenxa yesi sizathu ama-Orishas anyanzeliswa ukuba ammeme ukuba athathe inxaxheba kwisikhephe sokwenza oko avumayo kodwa emva kokucenga izihlandlo ezininzi nokucela isikhalazo kuba sele kukho umonakalo omkhulu Into awayeyenzile ebantwini.
Xa wazibandakanyayo nemisebenzi yenkolo, njengoko wayenqwenela njalo, izinto zasedolophini zabuyela esiqhelweni; abafazi banokuma kwaye iiprojekthi ezazinomalungu omzimba zinokuqhubela phambili.
Ngamandla omhlaba, Ngobukho bomlilo, Ngokuphefumlelwa ngumoya, Ngobungangamsha bamanzi, ndibongoza ndaza ndacenga uOshun, Ngu amandla yeentliziyo ezingcwele kunye neenyembezi ezichithwe luthando, Ukuze baye (JMM) naphina apho bakhoyo, bezisa umoya wabo phambi kwam (LR), bewubopha ngokuqinisekileyo kum.
Wanga umoya wakhe ungageza amandla othandweni lwam kwaye ubuyisele uthando lwam nge-quadruple.
Leyo (JMM) ayifuni omnye umntu kwaye umzimba wakhe ungowam kuphela (LR) yeyam.
Ukuba (i-JMM) ayiseli, ayityi, ayithethi, ayimameli, musa ukucula ngaphandle kokuba ndikho.
Ngamana iinkumbulo zam zingambamba ngonaphakade, ngamandla oMthandazo.
Intombazana yam emhlophe, u-Oshun ay sebenzisa amandla akhe kwaye uhambise (i-JMM) kude kuye nawuphi na umfazi onayo okwangoku; Kwaye ukuba bendinokubiza igama lam.
Ndifuna ukubopha umoya kunye nomzimba we (JMM) kuba ndifuna ukuba aboshwe kwaye athande nam (LR) Ndifuna (JMM) ukuba aqhubeke nokuxhomekeka eluthandweni lwam, ndifuna ukumbona ephambana ngam (LR) onqwenela mna ngokungathi (LR) ndim Umntu wokugqibela ebusweni bomhlaba.
Ndifuna ukuba intliziyo yakhe inamathele kum ngonaphakade, ukuba egameni le-Oshun enkulu le mvakalelo iya kuchuma ngaphakathi (i-JMM) imshiye evalelwe iiyure zam ezingama-24 ngosuku.
OH Oshun, kufuneka undizisele (i-JMM), kuba ndiyamnqwenela, kwaye ndiyamfuna ngokukhawuleza.
Ngamandla akho afihliweyo, vumela (i-JMM) ukuba iqale ukundithanda (LR) ukusuka kulo mzuzu ngqo kwaye ucinga kuphela ngam (LR) ngokungathi ndim kuphela emhlabeni.
Leyo (JMM) yeza kum igcwele kum, igcwele ithemba nomnqweno, ukuba (iJMM) ayinalo uxolo de afike azokundijonga, abuyele kum. Oshun ndiyakubongoza ukuba undizise kwi (JMM.)
Oko (JMM) kundithanda kakhulu, yiza ngobumnene kwaye njengoko ndinqwenela. Ndiyabulela Oshun.
Kwaye ndiyathembisa ukuba uyakuhlala ephethe igama lakhe kunye nam. Amen
Lo ngumthandazo ka-Oshun lolona thando waziwayo.
Ukumcela ukuba asincede kwizinto zothando kukumnika ithuba lokungena kubomi bethu obusenyongweni ukuze asincede sifumane ubuthathaka bakhe kwaye simomeleze.
Kwiimeko apho iingxaki sele zigqithile kwaye kubonakala ngathi akukho nto inokwenziwa, ziimeko apho eba namandla ngakumbi ukuze asincede.
Ndingawenza nini umthandazo?
Imithandazo Zinokwenziwa nangaliphi na ixesha njengoko zisisixhobo esinokuzisebenzisa naphi na xa kufuneka.
Ukuba kuyinyani ukuba kumnandi ukukwazi ukuthandaza kwindawo elungileyo, kodwa oku akuyomfuneko eyodwa.
Sinokuhlala sithandaza, ngamaxesha onke kwaye kuzo zonke iindawo.
Ngaba umthandazo we-Oshun usebenza ngokukhawuleza?
Yonke imithandazo inamandla ukuba yenziwe ngokholo entliziyweni kuba asinakucela uncedo kumntu esicinga ukuba akanakusinceda.
Ukuba sithandaza kungenxa yokuba sikholelwa kumandla omthandazo.
Ukholo olungagungqiyo lufezekiswa ngokwenza, njengoko sifunda el mundo Okomoya siyakhula elukholweni nasekwazini kwayo yonke into enxulumene nemithandazo, ebaluleke kakhulu kubomi bethu.
Yenza awona mandla makhulu omthandazo ka-Oshun wothando!
Umthandazo onamandla wokubuyisa isithandwa
Umthandazo kuKufa okungcwele lothando
Iintlobo ezahlukeneyo, Injongo